Vanhu: "Regai kunditsoropodza!": Mutungamiriri weNorway anozivisa pachena kuti ari murudo - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »Vanhu:" Rega kunditsoropodza! ": Mutongi weNorway anozivisa pachena kuti ari murudo
Märtha Louise, mutambokadzi weNorway, ndiye mwanasikana wamambo uyo ari 4ème muhurongwa hwekutsvaga pachigaro. Iye ane makore 47 uye akaroora kubva ku2002 kusvika ku2016. Kubva kumuchato wake, vana 3 vakaberekwa. Vangave vakatarisa semhuri inofara, asi chokwadi ndechokuti vakaroorana vakarambana. Cherechedza zvakare kuti iyi ndiyo yokutanga kurambana kwemazuva ano emhuri yemhuri yeNorway.
Публикация от Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) 27 Фев 2019 mu 6: 22 PST
Nhasi, makore emakore 3 mushure mekurambana kwake, Märtha Louise akanyora pamusana peku Instagram kwake pepa shoko achizivisa ukama hwake hutsva! Mudiwa wake Shaman Durek, Spiritual Guide uye Muponesi.
Публикация от Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) 12 Май 2019 mu 12: 52 PDT
Akandiita kuti ndinzwisise kuti rudo rusingaverengeki ruriko ruripo panyika ino. Zvinondiita kuseka kupfuura ani zvake uye ine mazano akanaka kwazvo. Ndinonzwa ndine mufaro uye ndakaropafadzwa kuti ndiye mukomana wangu. Ndinokutendai, rudo rwangu, nokuti munondipa zvakakwana kumhuri yenyu. Ndinokuda iwe kusingaperi.
Публикация от Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) 28 Апр 2019 mu 8: 54 PDT
Sezvaunogona kuona, mharidzo yechipfeve ye rudo inogunzva chaizvo! Isu tinonzwisisa zvakajeka kuti inopenga murudo nemumwe wake anomupa rudo rwemukadzi wese anofanirwa kugamuchira. Asi, semunhu chero upi zvake wevanhu, Märtha Louise anoziva kuti acharamba achiita zvinopesana. Uye kwavari, zvakare, akasiyira shoko.
Публикация от Shaman Durek (@shamandurek) 28 Апр 2019 mu 1: 31 PDT
Uye kune avo vanonzwa kudiwa kwekutsoropodza: ​​Yeuka! Hazvisi kwauri kuti usarudze ini kana kuti nditonge. Handisi kusarudza murume wangu achifunga kukugutsa iwe kana kupinda mubhokisi rawakataura kwandiri mupfungwa dzako. Handisi kuchinja mumusoro wenyu uye ini hazvienderani nepfungwa yokuti iwe unogadzira ini. Ndinosarudza rudo uye ndizvo zvose.
Публикация от Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) 3 Апр 2019 mu 9: 59 PDT
Pakutanga kuonekwa, zvinoratidzika kuti mhandara yakanga isinganyanyi kunetseka kune vadzivisi vake. Angangodaro akawana mazwi asina kufadza munguva yakapfuura kuti akagamuchira urongwa uhwu hwekuti "zvakanakisisa ndezvokurwisana." Hatisi kumutonga uye tinongomuda kuti ufare muupenyu hwako hwega!